Iyo yakanyanya kusarudzwa yevechidiki zvinyorwa
Wongororo dzevechidiki zvinyorwa
3 akanakisa mabhuku eBlue Jeans
Kana paine munyori wezvinyorwa zvevechidiki zvakabuda zvine simba mumakore apfuura muSpain, iri Blue Jeans. Francisco de Paula Fernández akabudirira kushandisa pseudonym nyowani uye inokatyamadza yevateereri vake vechidiki. Kusvikira vaverengi vari pakati pemakore gumi nemaviri negumi nemanomwe kunogona kuitwa ...
3 akanakisa mabhuku aJay Asher
Zvichida zita rekuti "Mudiki wechidiki" chikonzero chekutiza chero kusahadzika pamusoro pebhuku rakanyanya kunangana nevanhu vakuru pane vechidiki. Ichokwadi ndechekuti vanyori veiyi genre vanowanda mumakore achangopfuura nekubudirira kukuru, vachibatanidza nyaya dzerudo nepakati pakati ...
3 akanakisa mabhuku aJames Dashner
Zvinyorwa zvevechidiki zvine rudo runenge rwakaparadzaniswa pakati pemhando dzerudo (vhezheni yevechiri kuyaruka) uye fungidziro kana fungidziro yesainzi. Iwe unoziva, kushambadzira indasitiri kunoraira kuti ifunge kuti inoziva pekurovera chaiyo hit pakati pevaverengi vekutanga. Kunyangwe hazvo, kutaura chokwadi, tinogona kuwana imwe mhando ye ...
Knife Muruoko, naPatrick Ness
Iyo nyaya yaT Todd Hewitt, yakataurwa munoverengeka iyi, ndiyo paradigm yemunhu zvinoenderana nenzvimbo yake. Iyo chete nharaunda yazvino yenzanga yedu inobatwa seyakaitika ramangwana mune ino nyaya. Iko kutora kwemaonero iyo sainzi ngano inotipa sechikonzero che ...
Riquete iyo ine pompadour, ye Amélie Nothomb
Imwe yeminhenga yazvino inoshamisa ndeye Amélie Nothomb. Rinonyorwa rake rekare rakaburitswa muSpain, The Count Neville Mhosva, yakatipinza mune yakasarudzika dhizaini ine seti dhizaini iyo, kana yakawanikwa naTim Burton, inozopedzisira yave firimu, pamwe nezvakawanda zveakambogadzira. Asi mu…
Iwe hausi mhando yangu, kubva kuChloe Santana
Pane nguva yekuti rudo rwunogona kuve varaidzo isina basa. Iwe unogona kutotenda kuti unayo pasi pesimba, asi iyo nguva yekudonha murudo pasina kudzoka inogara ichipera. Kunze kwekunge… kana zvinhu zvikaguma zvisiri kufamba zvakanaka, unokatyamadzwa nekushushikana. Tora nekutora. Une ...
Yakasununguka naPatrick Ness
Kutarisana nedzimwe nyaya dzemagariro kubva murondedzero yevechidiki kwakakosha mukutarisana nekuziva uye kugadzirisa kweakasiyana nezvekupokana kwevanhu. Uye ini ndinoti "zvakakosheswa" nekuti iri mumazera ehudiki uko marongero ezve zvatichava mukukura akaiswa. Vechidiki vanoburitswa pachena ...